प्रजातन्‍त्रलाई सबल बनाउन राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र आवश्यक छ : राप्रपा अध्यक्ष – Enepali Samchar
प्रजातन्‍त्रलाई सबल बनाउन राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र आवश्यक छ : राप्रपा अध्यक्ष
February 9, 2021 adminLeaveaComment on प्रजातन्‍त्रलाई सबल बनाउन राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र आवश्यक छ : राप्रपा अध्यक्ष
enepalisamchar काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष पशुपति शम्शेर जबराले प्रजातन्‍त्रलाई सबल बनाउन राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र नल्याइ सुखै नभएको बताएका छन्। “स्थायित्व प्राप्त गर्न र प्रजातन्‍त्रलाई सुदृढ तुल्याउन हिन्दू राष्ट्रको बलियो आधार र अभिभावकको रूपमा राजसंस्था अपरिहार्य बनेको छ। देशमा विद्यमान संकट मोचन गर्ने आधार पनि यिनै हुन्,” राप्रपा अध्यक्ष राणाले काठमाडौं जिल्लास्तरीय पार्टी भेलामा बोल्दै भने। झण्डै दुई तिहाइको जनादेश अवमूल्यन गर्ने साम्यवादी पार्टी वा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने नेपाली कांग्रेसले देशलाई सही दिशा दिन नसक्ने राणाले दाबी गरे।
प्रधानमन्‍त्री ओलीले निर्वाचन आयोगलाई भने- निर्वाचनको अवधिमा दलभित्रको विवादमा आयोग प्रवेश गर्न मिल्दैन
काठमाडौं। प्रधानमन्‍त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको अवधिमा दलभित्रको विवादमा आयोग प्रवेश गर्न नमिल्ने बताएका छन्। आज निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र अन्य आयुक्तहरूसँग छलफल गर्दै उनले आयोगलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दुई अध्यक्षबीचको विवादमा प्रवेश नगर्न आग्रह गरेका हुन्। “मैले ६४ प्रतिशत मतको प्रतिनिधित्व गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफरिस गरेको हुँ। त्यसपछि कसैले पार्टी छाडेको होला,” छलफलमा सहभागी एक आयुक्तले प्रधानमन्‍त्री ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै देखापढीसँग भने, “निर्वाचनको अवधिमा दलभित्रको विवादमा आयोग प्रवेश गर्न मिल्दैन।” २०७५ जेठ ३ गते तत्कालिन दुई पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको र यस सम्बन्धी सूचना आयोगले जेठ २३ गते जारी गरेको स्मरण उनले छलफलका क्रममा गरेका थिए।
“म एउटै दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतले प्रधानमन्‍त्री भएको थिएँ। पुस ५ गते मेरो सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदासम्म मेरो त्यो हैसियत कायमै थियो,” प्रधानमन्‍त्री ओलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई भने। पार्टी एकीकरणपछि सम्पन्‍न उपनिर्वाचन र राष्ट्रिय अध्यक्षको निर्वाचनमा आफ्नो एकल हस्ताक्षरमा उम्मेदवार सिफारिस गरेकोसमेत उनले आयोगलाई जानकारी गराए। “म पहिलो अध्यक्ष हुँ। किन मेरो एकल हस्ताक्षर मान्य नहुने ? केही मान्छे बाहिरिएको हो। उनीहरूले बहुमत छौं भनेका पनि होलान्,” प्रधानमन्‍त्री ओलीले भने, “पुस ५ गते मैले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि त यस्ता कुनै कुरा थिएनन्। १२० दिनभित्र विवाद गर्न पाइदैंन।”
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समूहले बिभिन्‍न निर्णय गरेर आयोगमा बुझाएको र पार्टीको आधिकारितामा प्रश्न गरेकोप्रति पनि प्रधानमन्‍त्री ओलीले आपत्ति जनाए। “पार्टीको महासचिव र अध्यक्षलाई जानकारी छैन। बैठक कसरी बस्यो? बालुवाटारमा पुस ५ गते कुनै बैठक बसेको छैन,” प्रधानमन्‍त्री ओलीले आयोगका पदाधिकारीलाई भने। नेकपाले गरेका निर्णयमा आफ्नो बाहेक अरु कसैको हस्ताक्षरले मान्यता नपाउने दाबी उनले गरे। उनले थपे, “मेरोबाहेक अरुको एकल हस्ताक्षर चलेको छैन। कहिलेकाहिँ मेरोसँगै प्रचण्डको पनि पनि चलेको छ।”
आफूले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेपछि अनुमोदन मात्रै गरेको जानकारी प्रधानमन्‍त्री ओलीले आयोगलाई दिए। “पूर्वसहमतिअनुसार तीन महिनामा एकता र दुई वर्षमा महाधिवेशन नभएको कारण केन्द्रीय सदस्य बिस्तार गरेको हुँ,” उनले भने। ‘सूर्य’ चिन्हमा कसैले दाबी गर्न मिल्दैन
“सुरुमा माधव नेपाल र वलराम उपाध्यायले हसिंया र मकैको घोगा दर्ता गराउनु भएको थियो। हामीले सूर्य चिन्ह कायम गरेको हो। हामी त्यसयता सूर्य चिन्हमै निर्वाचन लड्दै आएका छौं,” प्रधानमन्‍त्री ओलीले भने। छलफलका क्रममा प्रधानमन्‍त्री ओलीले २०७४ असोज १४ गते आफू र प्रचण्डबीच निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति भएको बताए। तर उक्त सहमति दुई दिन टिक्न नसकेको उनले जनाए। एउटै चिन्ह (सूर्य)मा निर्वाचन लड्ने सहमति गरेको भएपनिअसोज १६ गते प्रचण्ड उक्त निर्णयबाट पछि हटेको उनले बताए। “प्रचण्ड कहिल्यै सूर्य चिन्हमा निर्वाचन लड्नुभएको छैन। अब अहिले किन चाहियो सूर्य चिन्ह?,” प्रधानमन्‍त्री ओलीले भने।
नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा भाडामा बसेको उनले आयोगलाई जानकारी दिए। प्रचण्ड समूह पेरिसडाँडामा सरीसकेको समेत उनले बताए। “देशको प्रमुख पार्टीको अध्यक्ष दलबिहीन र स्वतन्त्र हुन्छ? यो कुन कानुन, तथ्य र तर्कका आधारमा सम्भव हुन्छ?” प्रधानमन्‍त्री ओलीले भने, “पुस ५ गतेपछि कसैले कुनै निर्णय गरेर आयौं भन्छ भने त्यो जालझेल राजनीति हो।”
थपिए ९ लाख बढी मतदाता, आगामी निर्वाचनमा कुल मतदाता स‌ंख्या पुग्यो यति धेरै
१३ वर्षसम्म यी युवती घोडा बनेर बसिन्